(SAWIRRO) Shacabka Garowe: Laascaano Madi ma ahan, waxaana la joogaa xilligii laga xorayn lahaa maamulka gooni goosadka ah. - BAARGAAL.NET
(SAWIRRO) Shacabka Garowe: Laascaano Madi ma ahan, waxaana la joogaa xilligii laga xorayn lahaa maamulka gooni goosadka ah.
Mudaharaad balaaran oo shacabka Garowe ay kaga soo horjeedaan dhibaatada iyo duulaanka maamulka gooni u goosadka ah ee Hargeysa uu ku soo qaaday gobolka Sool ayaa maanta ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland.
Dadweynaha mudaharaadka dhigayay oo ay ka muuqatay shacuur xoogan ayaa waxay muujiyeen sida ay uga xunyihiin dhibaatada maamulka Hargeysa uu ku hayo shacabka Laascaanood, oo marti unoqday dil, xabsi iyo caburin joogta oo lagu hayo.
Waddooyinka Garowe ayay socod dheer ku Mareen dadweynihii isu Soo baxay iyagoo isugu tagay barxada Garowe, halkaasi oo ay warbaahinta kula hadleen.
Shacabku waxay ku dhawaaqayeen erayo ay kamid yihiin Laascaano Madi maahan, isla markaana maanta la joogo xilligii la xorayn lahaa.
Shacabku sidoo kale waxay ku dhawaaqayeen inay garabtaagan yihiin ciidamada difaaca Puntland ee ku jira jiidaha dagaalka ee gobolka Sool.